ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ ဖကျဒရယျစနဈနှငျ့မွနျမာနိုငျငံ – Federal Journal
စာရေးသူ၏နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ချီတက်ရန်တာစူနေသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ “ဖက်ဒရယ်” ဟူသောစကားလုံးကို ယခင်က ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုတော့ဖြင့် နှုတ်သွက်၊ လျှာသွက်၊ ခံတွင်းတွေ့စွာ ပြောဆိုနေကြပြီဖြစ်သည်။
ကောင်း၊ ဆိုး နှစ်တန်
အရာခပ်သိမ်းတွင် ကောင်းဆိုးနှစ်တန်ရှိနေပြန်ရာ ဖက်ဒရယ်ကလည်းဘာသားနှင့်ထုထားပါသနည်း။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းနှင့်အများတော့ရှိပေမပေါ့။ ဖက်ဒရယ်ဆိုသည်ကို မျှော်မှန်းအတွေးဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်နေကြရ သော်လည်း အပြောလွယ်သလောက်တော့ အလုပ်ကလွယ်ကူမည်မထင်ပါ။ ဖက်ဒရယ်သည် ဆေးတောင်ဝှေး မဟုတ်ပါ။ လောကနိဗ္ဗာန် မဟုတ်ပါ။ ဖက်ဒရယ်ရရင် “အားလုံးအိုကေ” ဟုတော့ မထင်ပါနှင့်။
ဖက်ဒရယ်အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တာဝန်ရှိသူများသာမက ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများမှာလည်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုပါရစေ။ မဝေးတော့သောကာလဝယ် ဖက်ဒရယ်ဟူသောအရသာကို ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ ပြည်သူတို့ခံစားရရှိနိုင်ဖို့ရန် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာတို့ကို ကြိုတင်လေ့လာ သိရှိ၊ ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းကိုလည်း အကြံပြု လိုပါသည်။ ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၇)ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ရှိ “Royal President Hotel”၌ ကျင်းပခဲ့သော “ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”တွင် The Euro-Burma Office (EBO) Myanmar မှ Executive Director ဦးဟန်ယောင်းဝေက “လူတိုင်းက ဖက်ဒရယ်ကိုလိုလားပေမယ့် ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိကြဘူး၊ အချို့သူတွေရဲ့ ထင်မြင်တာတွေဟာ တလွဲစီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ဆိုဖူးပါသည်။
“ဖက်ဒရယ်”ကို နိုင်ငံရေးသဘောတရားတစ်ခုအဖြစ် ကျင့်သုံးကြသောအခါ “နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်းကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံတော်တစ်ခုကို အတူတကွ ပူးပေါင်းထူထောင်ကြခြင်းနှင့် ၎င်းနိုင်ငံတော် ၏အာဏာကို အဆင့်ဆင့်ခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်း” ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ပြည်ထောင်စု (Federal) စနစ်ကို-
(၂) သဏ္ဍာန်ဆောင်ပြည်ထောင်စု (Quasi Federal)
(3) ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် (True Federal)
(၄) တစ်ပြည်ထောင်ဆန်သော ပြည်ထောင်စု
(၅) ပြည်နယ်များက အခွင့်အရေးသာလွန်သည့်ပြည်ထောင်စု (Highly Federalised State) နှင့်
(၆) ပြည်နယ်များက အခွင့်အရေးနည်းပါးသည့်ပြည်ထောင်စု (Highly Centralized State) ဟူ၍ခွဲခြားလေ့ လာကြပါသည်။ သို့သော် ခေတ်စနစ်အတွေ့အကြုံများအရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက “မတူကွဲပြားသော လူ့အဖွဲ့အစည်း များအကြား ပဋိပက္ခများကိုအဖြေရှာနိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက် အလွန်တစ်ရာအကျိုးပြုသည့် စနစ်တစ်ရပ်” အဖြစ် နားလည်လက်ခံလာကြပြီဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်မစိမ်းပါ။ “မြန်မာ့ဖက်ဒရယ်အစ ၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်က” ဟူ၍ပင် ဆိုနိုင်ပါ သည်။ သို့သော် မြန်မာ့ဖက်ဒရယ်သည် ရှင်ကြီးဝမ်း၊ ရှင်ငယ်ဝမ်းတို့ကို ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းပြီး အောင်မြင်မှုနှင့် အလှမ်း ဝေးနေခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းကို ငဲ့စောင်းကြည့်သောအခါ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအနားသို့ ရောက်လာ လိုက်၊ ပြန်ခွာလိုက်နှင့်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေမှ ယခုအခါ ပြန်လည်တာစူနေသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းတူခင်းကျင်းကြရာ၌ အဓိကမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စေ့ငှသေချာ စွာ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းရမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးကို ၂၁-ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှ ဘုံသဘောတူညီချက်များ ရယူခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီနည်းလမ်းဖြင့် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုထင်၏ မည်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ရရှိလာသည့် အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်သူသို့ချပြကာ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒမဲခံယူပွဲဖြင့် အတည်ပြုမည်ဟု ယူဆသည်။ ဤအစီအစဉ်တိုင်း ဆိုလျှင် ၂၀၁၉-ခုနှစ်ကလည်းကုန်တော့မည်ဖြစ်၍၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအမီ အခြေခံဥပဒေအသစ်ထွက်ပေါ်လာမည် လား စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်၏။ လက်ရှိအစိုးရ “အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ” (လမ်းပြမြေပုံ) အမှတ်စဉ် (၅)တွင် “ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်”နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသား ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း ဟူ၍ လုပ်ငန်းစဉ်အတိအကျ ချမှတ်ကာ ကမ္ဘာသိကြေညာထားသည် မဟုတ်ပါလား။
ဖက်ဒရယ်၏အဓိကအသက်သွေးကြောမှာ တန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲများက ဘဏ္ဍာရေး(ဘတ်ဂျက်)၊ အခွန်အကောက်၊ သဘာဝသဃံဇာတ၊ မြေယာ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ ကာကွယ်ရေး စသည်ဖြင့်မနည်းပါ။
ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွင် ဗဟိုအစိုးရကဘာတွေ ဘယ်လောက်ထိပေးမည်နည်း။ ဘတ်ဂျက်ကို မည်သို့ရယူခွဲဝေ သုံးစွဲမည်နည်း။ သဘာဝသဃံဇာတပေါများသော တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်က အဆိုပါသဃံဇာတကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ခံစား နိုင်ပါမည်နည်း။ ဒေသထွက်ကုန်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်သို့ တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူးခွင့် ပြုသင့်မပြုသင့်၊ မိမိဒေသ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ဘတ်ဂျက်ကို မည်သို့ရယူဆောင်ရွက်ရပါမည်နည်း။ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရတွင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာန ထားရှိခွင့် ပြုသင့်မပြုသင့်။ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်တပ်မတော်ကို မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်း ကွပ်ကဲပါမည်နည်း။ ကိုယ်ပိုင်အခြေခံဥပဒေထားရှိခွင့်နှင့်ပြည်နယ်အသစ်ဖွဲ့စည်းခွင့်များအပေါ် မည်သို့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ပါမည်နည်း။
ပြည်နယ်အချင်းချင်းဖြစ်ပွားသော အမှုကိစ္စများကို မည်သို့ဖြေရှင်းပါမည်နည်း။ ပြည်နယ်များကို မည်သို့အမည် များ ပေးသင့်ပါသနည်း။ လူမျိုးအမည်ကို အစွဲပြုမည်လော၊ နယ်မြေ (သို့) အခြားအမည် (သက်ဆိုင်ရာဒေသနေ ပြည်သူတို့ သဘောတူသောအမည်) မည်သည်ကို ရွေးချယ်မည်နည်း၊ နိုင်ငံတော်အမည်ကို မည်သို့မှည့်ခေါ်မည်နည်း။ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကို မည်သို့ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးမည်နည်း။ အမျိုးသားလွှတ်တော် (လူမျိုးစုလွှတ်တော်)သို့ မည်သို့ သော အချိုးဖြင့် စေလွှတ်သင့်သနည်း။ မည်သည့်ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် သတ်မှတ်မည်နည်း။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေများကို မည်သို့စဉ်းစားမည်နည်း။ အရေးကြီးဆုံးကို ပြောရပါလျှင် “ခွဲမထွက်ရ” ဟူသည့်သဘောထားကို မည်သည့်စကားလုံးဖြင့် အများသဘောတူပြဋ္ဌာန်းမည်နည်း စသည်စသည်ဖြင့် စဉ်းစားဖွယ်ရာများမှာ များပြားလှပေသည်။
၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၁၆/၁၇) ရက်နေ့များကနေပြည်တော်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော “ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ မစ္စတာစတီဖန်ဆန်ဒီဖော့ဒ် က “ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ တည်ဆောက်မယ့်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာနှင့် ပကတိအနေ အထားအပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို တည်ဆောက်ကြရမည်ဆိုတာ အလေးအနက်ပြော ကြားလိုပါတယ်။ ကနေဒါအပါအဝင် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွေ့အကြုံအရ အမြော်အမြင်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းမှာလည်း စေ့စပ်ပြေငြိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အားလုံးသဘောတူတဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိဖို့ လိုအပ်တယ် စတဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ နားလည်မှုဆိုတဲ့အခြေခံတွေအပေါ် ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသာမက နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့စီးပွားရေးအရ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ရရှိလာပါလိမ့် မည်”ဟုပြောကြားခဲ့ကြသည်ကို သတိရမိသည်။
ဆိုခဲ့ပါ ဥပမာစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ခိုင်မာသည်ထက်ခိုင်မာစွာ တိုးတက်ရုပ်လုံး ပေါ်စေဖို့ဆိုလျှင် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့၊ ဥပဒေပြုအဖွဲ့၊ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၏အရည်အချင်းက ရှေ့တန်းရောက်လာပေမည်။ ဖက်ဒရယ်ဇာတ်လမ်းတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်နိုင်နင်းစွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးလှပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်များက မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရည်အချင်းမီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆန္ဒစွဲမပါ ရွေးချယ်ကြဖို့ တာဝန်ရှိလာပါသည်။
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုရပါလျှင် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် လိုတရဆေးတစ်ပါးမဟုတ်သော်ငြား “သုံးတတ်လျှင်ဆေး” ကြောင်း . . . ။
စာရေးသူ၏နိုငျငံသညျ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျနိုငျငံတျောသဈဆီသို့ ခြီတကျရနျတာစူနသေညျ့နိုငျငံဖွဈသညျ။ “ဖကျဒရယျ” ဟူသောစကားလုံးကို ယခငျက ထမငျးလုံးတစ်ဆခွေောကျခဲ့ကွသျောလညျး ယခုတော့ဖွငျ့ နှုတျသှကျ၊ လြှာသှကျ၊ ခံတှငျးတှစှေ့ာ ပွောဆိုနကွေပွီဖွဈသညျ။
ကောငျး၊ ဆိုး နှဈတနျ
အရာခပျသိမျးတှငျ ကောငျးဆိုးနှဈတနျရှိနပွေနျရာ ဖကျဒရယျကလညျးဘာသားနှငျ့ထုထားပါသနညျး။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး အနညျးနှငျ့အမြားတော့ရှိပမေပေါ့။ ဖကျဒရယျဆိုသညျကို မြှျောမှနျးအတှေးဖွငျ့ စိတျကူးယဉျနကွေရ သျောလညျး အပွောလှယျသလောကျတော့ အလုပျကလှယျကူမညျမထငျပါ။ ဖကျဒရယျသညျ ဆေးတောငျဝှေး မဟုတျပါ။ လောကနိဗ်ဗာနျ မဟုတျပါ။ ဖကျဒရယျရရငျ “အားလုံးအိုကေ” ဟုတော့ မထငျပါနှငျ့။
ဖကျဒရယျအိမျမကျကို အကောငျအထညျဖျောရာတှငျ တာဝနျရှိသူမြားသာမက ကြှနျုပျတို့ပွညျသူမြားမှာလညျး တာဝနျရှိသညျဟု ဆိုပါရစေ။ မဝေးတော့သောကာလဝယျ ဖကျဒရယျဟူသောအရသာကို ရာခိုငျနှုနျးတျောတျောမြားမြား ပွညျသူတို့ခံစားရရှိနိုငျဖို့ရနျ ဖကျဒရယျဆိုငျရာတို့ကို ကွိုတငျလလေ့ာ သိရှိ၊ ပွငျဆငျသငျ့ကွောငျးကိုလညျး အကွံပွု လိုပါသညျ။ ၂၀၁၆-ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ (၁၆) ရကျနမှေ့ (၁၇)ရကျနအေ့ထိ နပွေညျတျောရှိ “Royal President Hotel”၌ ကငျြးပခဲ့သော “ဖကျဒရယျဆိုငျရာ အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ”တှငျ The Euro-Burma Office (EBO) Myanmar မှ Executive Director ဦးဟနျယောငျးဝကေ “လူတိုငျးက ဖကျဒရယျကိုလိုလားပမေယျ့ ဖကျဒရယျဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာ မသိကွဘူး၊ အခြို့သူတှရေဲ့ ထငျမွငျတာတှဟော တလှဲစီဖွဈနတေယျဆိုတာ တှရေ့တယျ” ဟု ဆိုဖူးပါသညျ။
“ဖကျဒရယျ”ကို နိုငျငံရေးသဘောတရားတဈခုအဖွဈ ကငျြ့သုံးကွသောအခါ “နှဈဦးနှဈဖကျ အပွနျအလှနျ လေးစားအသိအမှတျပွုခွငျးကို အခွခေံ၍ နိုငျငံတျောတဈခုကို အတူတကှ ပူးပေါငျးထူထောငျကွခွငျးနှငျ့ ၎င်းငျးနိုငျငံတျော ၏အာဏာကို အဆငျ့ဆငျ့ခှဲဝကေငျြ့သုံးခွငျး” ဖွဈကွောငျး အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုကွသညျ။ ပွညျထောငျစု (Federal) စနဈကို-
(၂) သဏ်ဍာနျဆောငျပွညျထောငျစု (Quasi Federal)
(3) ပွညျထောငျစုစဈစဈ (True Federal)
(၄) တဈပွညျထောငျဆနျသော ပွညျထောငျစု
(၅) ပွညျနယျမြားက အခှငျ့အရေးသာလှနျသညျ့ပွညျထောငျစု (Highly Federalised State) နှငျ့
(၆) ပွညျနယျမြားက အခှငျ့အရေးနညျးပါးသညျ့ပွညျထောငျစု (Highly Centralized State) ဟူ၍ခှဲခွားလေ့ လာကွပါသညျ။ သို့သျော ခတျေစနဈအတှအေ့ကွုံမြားအရ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက “မတူကှဲပွားသော လူ့အဖှဲ့အစညျး မြားအကွား ပဋိပက်ခမြားကိုအဖွရှောနိုငျပွီး ငွိမျးခမျြးစှာ အတူယှဉျတှဲနထေိုငျရေးအတှကျ အလှနျတဈရာအကြိုးပွုသညျ့ စနဈတဈရပျ” အဖွဈ နားလညျလကျခံလာကွပွီဖွဈကွောငျး ပညာရှငျမြားက ဆိုပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံသညျ ဖကျဒရယျစနဈနှငျ့မစိမျးပါ။ “မွနျမာ့ဖကျဒရယျအစ ၁၉၄၇ ပငျလုံစာခြုပျက” ဟူ၍ပငျ ဆိုနိုငျပါ သညျ။ သို့သျော မွနျမာ့ဖကျဒရယျသညျ ရှငျကွီးဝမျး၊ ရှငျငယျဝမျးတို့ကို ဝငျရောကျဖွတျသနျးပွီး အောငျမွငျမှုနှငျ့ အလှမျး ဝေးနခေဲ့သညျ။ သမိုငျးကွောငျးကို ငဲ့စောငျးကွညျ့သောအခါ ဖကျဒရယျစနဈသညျ မွနျမာနိုငျငံအနားသို့ ရောကျလာ လိုကျ၊ ပွနျခှာလိုကျနှငျ့ဖွဈနသေညျ့ အခွအေနမှေ ယခုအခါ ပွနျလညျတာစူနသေညျ့ အခွအေနသေို့ ရောကျရှိနပွေီ ဖွဈပါသညျ။
ဖကျဒရယျနိုငျငံတျောသဈဆီသို့ ခြီတကျရာလမျးကွောငျးတူခငျးကငျြးကွရာ၌ အဓိကမှာ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေးဖွဈသညျ။ ပွငျဆငျမညျ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒတှေငျ ဖကျဒရယျဆိုငျရာအခကျြအလကျမြားကို စငှေ့သခြော စှာ ထညျ့သှငျးပွဋ်ဌာနျးရမညျဖွဈသညျ။ ပွငျဆငျရေးဆိုငျရာအခကျြအလကျရှာဖှရေေးကို ၂၁-ရာစု ပငျလုံညီလာခံမှ ဘုံသဘောတူညီခကျြမြား ရယူခွငျးဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေး ပူးပေါငျးကျောမတီနညျးလမျးဖွငျ့ လညျးကောငျး ဆောငျရှကျနသေညျဟုထငျ၏ မညျသညျ့နညျးလမျးကို အသုံးပွုသညျဖွဈစေ ရရှိလာသညျ့ အခွခေံ ဥပဒမေူကွမျးကို ပွညျသူသို့ခပြွကာ ပွညျလုံးကြှတျဆန်ဒမဲခံယူပှဲဖွငျ့ အတညျပွုမညျဟု ယူဆသညျ။ ဤအစီအစဉျတိုငျး ဆိုလြှငျ ၂၀၁၉-ခုနှဈကလညျးကုနျတော့မညျဖွဈ၍၂၀၂၀ရှေးကောကျပှဲအမီ အခွခေံဥပဒအေသဈထှကျပျေါလာမညျ လား စဉျးစားဖှယျဖွဈ၏။ လကျရှိအစိုးရ “အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးမူဝါဒ” (လမျးပွမွပေုံ) အမှတျစဉျ (၅)တှငျ “ပွညျထောငျစုသဘောတူညီခကျြ”နှငျ့အညီ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေးသား ခွငျး၊ အတညျပွုခွငျး ဟူ၍ လုပျငနျးစဉျအတိအကြ ခမြှတျကာ ကမ်ဘာသိကွညောထားသညျ မဟုတျပါလား။
ဖကျဒရယျ၏အဓိကအသကျသှေးကွောမှာ တနျးတူရေးနှငျ့ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ဖွဈသညျ။ နောကျဆကျတှဲမြားက ဘဏ်ဍာရေး(ဘတျဂကျြ)၊ အခှနျအကောကျ၊ သဘာဝသဃံဇာတ၊ မွယော၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာဆကျဆံရေး၊ ပွညျထဲရေး၊ ကာကှယျရေး စသညျဖွငျ့မနညျးပါ။
ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့တှငျ ဗဟိုအစိုးရကဘာတှေ ဘယျလောကျထိပေးမညျနညျး။ ဘတျဂကျြကို မညျသို့ရယူခှဲဝေ သုံးစှဲမညျနညျး။ သဘာဝသဃံဇာတပေါမြားသော တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျက အဆိုပါသဃံဇာတကို မညျသို့ဆောငျရှကျခံစား နိုငျပါမညျနညျး။ ဒသေထှကျကုနျမြားကို ပွညျတှငျးပွညျပဈေးကှကျသို့ တိုကျရိုကျဖွနျ့ဖွူးခှငျ့ ပွုသငျ့မပွုသငျ့၊ မိမိဒသေ ဖှဲ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ လိုအပျဘတျဂကျြကို မညျသို့ရယူဆောငျရှကျရပါမညျနညျး။ ဒသေဆိုငျရာအစိုးရတှငျ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးဌာန ထားရှိခှငျ့ ပွုသငျ့မပွုသငျ့။ ရဲတပျဖှဲ့နှငျ့တပျမတျောကို မညျသညျ့ပုံစံဖွငျ့ ဖှဲ့စညျး ကှပျကဲပါမညျနညျး။ ကိုယျပိုငျအခွခေံဥပဒထေားရှိခှငျ့နှငျ့ပွညျနယျအသဈဖှဲ့စညျးခှငျ့မြားအပျေါ မညျသို့သတျမှတျပွဋ်ဌာနျး ပါမညျနညျး။
ပွညျနယျအခငျြးခငျြးဖွဈပှားသော အမှုကိစ်စမြားကို မညျသို့ဖွရှေငျးပါမညျနညျး။ ပွညျနယျမြားကို မညျသို့အမညျ မြား ပေးသငျ့ပါသနညျး။ လူမြိုးအမညျကို အစှဲပွုမညျလော၊ နယျမွေ (သို့) အခွားအမညျ (သကျဆိုငျရာဒသေနေ ပွညျသူတို့ သဘောတူသောအမညျ) မညျသညျကို ရှေးခယျြမညျနညျး၊ နိုငျငံတျောအမညျကို မညျသို့မှညျ့ချေါမညျနညျး။ အခွခေံဥပဒခေုံရုံးကို မညျသို့ဖှဲ့စညျးတာဝနျပေးမညျနညျး။ အမြိုးသားလှတျတျော (လူမြိုးစုလှတျတျော)သို့ မညျသို့ သော အခြိုးဖွငျ့ စလှေတျသငျ့သနညျး။ မညျသညျ့ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖွဈ သတျမှတျမညျနညျး။ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ စာပမြေားကို မညျသို့စဉျးစားမညျနညျး။ အရေးကွီးဆုံးကို ပွောရပါလြှငျ “ခှဲမထှကျရ” ဟူသညျ့သဘောထားကို မညျသညျ့စကားလုံးဖွငျ့ အမြားသဘောတူပွဋ်ဌာနျးမညျနညျး စသညျစသညျဖွငျ့ စဉျးစားဖှယျရာမြားမှာ မြားပွားလှပသေညျ။
၂၀၁၆-ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ (၁၆/၁၇) ရကျနမြေ့ားကနပွေညျတျောတှငျကငျြးပပွုလုပျသော “ဖကျဒရယျဆိုငျရာ အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ၌ ကနဒေါနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ မွနျမာပိုငျးအစီအစဉျမှ မစ်စတာစတီဖနျဆနျဒီဖော့ဒျ က “ဖကျဒရယျစနဈကိုတညျဆောကျတဲ့အခါမှာ တညျဆောကျမယျ့နိုငျငံရဲ့ သမိုငျးကွောငျးအစဉျအလာနှငျ့ ပကတိအနေ အထားအပျေါမူတညျပွီး ကိုယျ့နိုငျငံနဲ့ကိုကျညီတဲ့ ဖကျဒရယျစနဈကို တညျဆောကျကွရမညျဆိုတာ အလေးအနကျပွော ကွားလိုပါတယျ။ ကနဒေါအပါအဝငျ ဖကျဒရယျနိုငျငံတှရေဲ့ ဖကျဒရယျစနဈတညျဆောကျရေးအတှအေ့ကွုံအရ အမွျောအမွငျရှိပွီး ကြှမျးကငျြတဲ့နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျလိုအပျပါတယျ။ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျတှအေခငျြးခငျြးမှာလညျး စစေ့ပျပွငွေိမျးနိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ နောကျပွီး အားလုံးသဘောတူတဲ့ ဘုံသဘောတူညီခကျြတဈခုရှိဖို့ လိုအပျတယျ စတဲ့လိုအပျခကျြတှေ ရှိပါတယျ။ နားလညျမှုဆိုတဲ့အခွခေံတှအေပျေါ ဖကျဒရယျစနဈတညျဆောကျမယျဆိုရငျ အမြိုးသားပွနျလညျရငျကွားစရေ့ေးသာမက နိုငျငံရေးတညျငွိမျမှုနဲ့စီးပှားရေးအရ ခမျြးသာကွှယျဝမှုကို ရရှိလာပါလိမျ့ မညျ”ဟုပွောကွားခဲ့ကွသညျကို သတိရမိသညျ။
ဆိုခဲ့ပါ ဥပမာစိနျချေါမှုမြားကို ကြျောလှားနိုငျဖို့ရနျနှငျ့ ဖကျဒရယျစနဈခိုငျမာသညျထကျခိုငျမာစှာ တိုးတကျရုပျလုံး ပျေါစဖေို့ဆိုလြှငျ ဒသေဆိုငျရာအစိုးရအဖှဲ့၊ ဥပဒပွေုအဖှဲ့၊ တရားစီရငျရေးအဖှဲ့မြားနှငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား၊ နိုငျငံရေးသမားမြား၏အရညျအခငျြးက ရှတေ့နျးရောကျလာပမေညျ။ ဖကျဒရယျဇာတျလမျးတှငျပါဝငျသရုပျဆောငျမညျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြားအနဖွေငျ့ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျနိုငျနငျးစှာသရုပျဆောငျနိုငျဖို့က အရေးကွီးလှပါသညျ။ ထိုသို့ဆိုလြှငျ ဒသေခံမဲဆန်ဒရှငျမြားက မိမိဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အရညျအခငျြးမီကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဆန်ဒစှဲမပါ ရှေးခယျြကွဖို့ တာဝနျရှိလာပါသညျ။
အနှဈခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရပါလြှငျ ဖကျဒရယျစနဈသညျ လိုတရဆေးတဈပါးမဟုတျသျောငွား “သုံးတတျလြှငျဆေး” ကွောငျး . . . ။